अमेरिका–चीन व्यापार युद्धको असर : मूल्य बढेपछि सुनको कारोबार चौपट | गृहपृष्ठ
Home समाचार अमेरिका–चीन व्यापार युद्धको असर : मूल्य बढेपछि सुनको कारोबार चौपट
on: १० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०७:०३ समाचार
अमेरिका–चीन व्यापार युद्धको असर : मूल्य बढेपछि सुनको कारोबार चौपट
काठमाडौं । यो साता छापावाला सुनको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गत बुधवार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ६३ हजार ३ सय पुगेको थियो । यो मूल्य हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको भनाइ छ ।
यसअघि २०७० भदौ १२ मा छापावाला सुनको मूल्य रू. ६३ हजार ३ सय थियो । त्यसको ५ वर्षपछि बुधवार सुनको मूल्य पुनः सोही विन्दुमा आएको हो । बिहीवार भने छापावाला सुन प्रतितोला ६३ हजार १ सयमा खरीदविक्री भएको छ । ५ वर्षको बीचमा २०७३ सालमा सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ४७ हजार २ सयसम्म झरेको थियो ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारअनुसार नेपालमा सुनको मूल्य निर्धारण हुन्छ । फागुन २ मा विश्वबजारमा सुनको मूल्य प्रतिऔंस १३ सय १८ डलर १० सेन्ट थियो । तर फागुन ८ सम्म आउँदा उक्त मूल्य १३ सय ४३ डलर १० सेन्टसम्म पुगेको छ । फागुन २ मा नेपाली बजारमा छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ६१ हजार ७ सय थियो ।
केही महीनादेखि शुरू भएको अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध अझै साम्य भएको छैन, जसले गर्दा विश्वअर्थतन्त्र तथा शेयर बजारमा ह्रास आइरहेको छ । सोही कारण सुनको मूल्य बढेको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यको भनाइ छ ।
‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशमा संकटकाल घोषणा गर्दा विश्वअर्थतन्त्र तथा शेयर बजारमा पनि नकरात्मक असर परेको छ,’ शाक्यले भने, ‘जसले गर्दा शेयर बजारका लगानीकर्ता सुनतर्फ आकर्षित भएका छन् ।’
नेपालमा डलरको भाउमा सुन आयात हुन्छ । अहिले डलरको भाउ पनि बढेको छ । सोही कारण नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको शाक्यको भनाइ छ । उनले भने, ‘पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकले डलरको सट्टा सुन होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यस कारण विश्वबजारमै सुनको आपूर्ति कम छ ।’ माग बढेको बेला आपूर्ति कम हुँदा सुनको मूल्य बढेको उनको भनाइ छ । चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्ध साम्य नभएसम्म सुनको मूल्य नघट्ने उनले बताए ।
सुनको मूल्य बढेपछि कारोबार घटेको व्यवसायी बताउँछन् । सुनचाँदी कला व्यवसाय संघका अध्यक्ष द्वारिका विश्वकर्माले भने, ‘सुनको मूल्य अत्यधिक बढ्दा व्यवसायमा ह्रास आएको छ ।’ बराह ज्वेलरीका प्रबन्धक कृष्ण खातीले भने विवाहको सिजन भएकाले व्यवसायमा राहत मिलेको बताए ।
व्यवसायीका अनुसार विगतमा फागुन महीना दैनिक ६० किलोसम्म सुन खपत हुन्थ्यो । यस वर्ष भने प्रतिदिन करीब ४० किलोसम्म खपत भइरहेको महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष शाक्यले बताए ।
किन्नेभन्दा बेच्ने बढी
मूल्य बढेका कारण सुन खरीद गर्नेभन्दा विक्री गर्नेको संख्या बढेको नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष गणेश लकान्द्रीले बताए । उनले भने, ‘पछि मूल्य घट्दा घाटा हुने सम्भावना भए पनि ग्राहकको सन्तुष्टिका लागि महँगोमा सुन खरीद गरिरहेका छौं ।’
व्यापार सम्झौताले रोक्ला विश्वव्यापी आर्थिक सुस्ती ?
१३ फाल्गुन २०७५, सोमबार १७:४२
अमेरिका–चीन व्यापार वार्ता सफल बनाउने ७ तत्वहरु
२२ पुष २०७५, आईतवार १७:५०
चीनमा साना व्यवसायलाई कर्जा प्राप्ति मुश्किल
५ मंसिर २०७५, बुधबार १६:१५